MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka qayb galay xafladda caleema-saarka Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Goleyaasha dowladda looga baahan yahay in ay yeeshaan wadashaqeyn buuxda si loo adkeeyo dowladnimadeenna.
Mar uu ka hadlayay siyaasadda dowladda ee ku wajahan arrimaha dibadda ayuu Madaxweynuha yiri "waxaan rabnaa inaan xiriir la yeelanno dawlad walba oo danta Soomaaliyeed ka shaqeynaysa, xiriirkaas oo ku dhisan wada shaqeyn, iskaashi iyo isxurmayn."
Madaxweynaha ayaa xildhibaannada uga mahadceliyey biseylka siyaasadeed iyo hufnaanta ay ku doorteen Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay xildhibaannada Golaha Shacabka hannaankii dimuqraadiyadda iyo hufnaanta ku salaysnaa ee ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ah.
Waxaa kale oo ammaanay xildhibaannadii u istaagay qabashada xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka , aqbalayna natiijadii codbixinta.
Khayre oo Jawaari la kulmay kadib Dagaal Siyaasadeed [Sawirro]
Soomaliya 12.04.2018. 00:15
Labada mas'uul ayaa yeeshay Kulanka gaar ah oo ka dhacay Villa Hargeysa...
Xildhibaano kasoo horjeeda Mooshinka Farmaajo oo bayaan soo saarey [Akhriso]
Soomaliya 16.12.2018. 00:04
Farmaajo oo saxiixay Miisaaniyadda 2019 oo Khilaaf ka dhex abuurtay BF
War Saxaafaded 01.01.2019. 10:24
Musharaxiin isku diiwaan-geliyay xilka Gudoomiyaha Gollaha Shacabka
Soomaliya 23.04.2018. 23:12
Soomaliya 30.04.2018. 18:59